Nov 09, 2017Comments Off on စာသင်သားများအတွက် လုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာ0393
လုပ်ငန်းကိစ္စများ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း-၃ (Business Correspondence – 2)
လုပ်ငန်းကိစ္စစာများ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့ခေတ် ကုမ္ပဏီအများစုသည် အီလက်ထရွန်နစ် စာပေးစာယူစနစ် (Electronic Mail) ကို အသုံးချနေကြသည်။ အဆိုပါစနစ်ကို အတိုကောက် အသုံးအနှုန်းအဖြစ် အီးမေးလ် (email) ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ ကွန်ပျူတာအင်တာနက်စနစ်ကို အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အင်တာနက်ကွန်ရက်ကိုဖြတ်၍ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း လက်ခံမည့်သူ၏ စာဝင်ပုံးထဲသို့ ရောက်ရှိသုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်ရောက်ရှိသည့်အခါ ဖွင့်ကြည့်
လိုက်သောအခါ ပေးပို့ ခဲ့သည့် နေ့ရက်၊ နာရီ၊ မိနစ်များကို ပြဆိုထားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သဖြင့် စာဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ကိစ္စကို တိကျစွာမှတ်တမ်း ရှိသွားစေနိုင်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အီးမေးလ်စာပေးပို့ခြင်းသည် မြန်ဆန်တိကျသော အကျိုးဆက်များ ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ မိမိပေးပို့သော အီးမေးလ်အတွက် အီးမေးလ်လိပ်စာ (email address) မှန်ကန်ရန် အရေးကြီးလှသည်။ ကုမ္ပဏီရုံး၊ လုပ်ငန်း၊ ဌါနကိစ္စများကို ပေးပို့လက်ခံကြခြင်းဖြစ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးအီးမေးလ် (business email address) ကိုအသုံးပြုကြရသည်။ လုပ်ငန်းသုံး အီးမေးလ်လိပ်စာတွင် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဌာန၏ အမည်သင်္ကေတ တစ်ခုခုပါရှိရပါမည်။ [email protected] ဟူသော လိပ်စာအနေအထား သဘာဝကို ဥပမာအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အီးမေးလ်စာများကိုပေးပို့ကြရာတွင် အောက်ပါနမူနာ ပုံစံစကားရပ်များ၊ စကားအသုံးအနှုန်းများ (place) များကို သိရှိနားလည် လေ့လာထားမည်ဆိုပါက ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အချို့ကိစ္စများအတွက် ခန့်ခန့်ညားညားပုံစံ (move formal) နှင့်အသုံးပြုကြလေ့ရှိသကဲ့သို့ တချို့ကိစ္စများတွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွက်သွက်လက်လက်ပုံစံ (less formal) ကို အသုံးပြုသည်ကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
More Formal: “I could be graltful if you could …”
“…. ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက ကျေးဇူးအနဂ္ဃ တင်ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်”
“I would appirate (it) if you could …”
“….. အားဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါက ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက် နေရမည်ဖြစ်ပါသည်”
Less Formal: “Could you possily ….?”
“….. ကိုဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်နိုင်ပါမည်လော”
“Could you please ….?”
“…. ကို ကျေးဇူးပြုပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါမည်လော”
Move Formal: ” I would be delighted to …”
” …. အတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကြားရမည် ထင်ပါသည်”
Less Formal: ” I will be happy to ….”
” …… ကိစ္စအတွက် ကြိုတင်ဝမ်းမြောက်နေမိမှာဖြစ်ပါသည်”
More Formal : ” I apologize for the delay in replying.”
အကြောင်းပြန်ရန် နောက်ကျမိသည့်အတွက် တောင်းပန်အပ်ပါသည်”
ကသိကအောက် ဖြစ်ခဲ့ရသမျှအပေါ် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
Please accept on sincere apologies.
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ရောကိုယ်ပါတောင်းပန်မှုကို လက်ခံပေးစေလိုပါသည်။
Less Formal: Sorry for the delay in replying.
အကြောင်းပြန်ကြားမှု နောက်ကျမှုကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။
ဒုက္ခပေးသကဲ့သို့ဖြစ်သွားရသည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါသည်။
We are very sorry ….
Move Formal : We regret that ….
ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် သတင်းပေးရခြင်းက …..
I am afraid that I must inform you of that ….
“….အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြင့် အကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။
Less Formal : Unfortunately….
I am sorry to have to tell you that ….
အရေးဆိုခြင်းကိစ္စ – အစပျိုးချက်
Move Formal : We wish to draw your attention to….
…. ကို အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။
…… နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားစာပေးပို့အပ်ပါသည်။
….. နှင့်ပတ်သက်၍ မကျေမနပ်ဖြစ်ရကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
Less Formal : I wanted to inform you about …
…… ကိစ္စအတွက် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
I would like to complain about ….
….. ကိစ္စအတွက် အရေးဆိုလိုပါသည်။
အရေးဆိုခြင်းကိစ္စ – စာပိတ်ချက်
Move Formal : I would apprise ciats your immediate atten-tion to the matter.
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အလျင်အမြန် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုပါက အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Less Formal : I would appreciate if you could solve it as soon as possible.
တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးမည်ဆိုပါက ကျေးဇူးတင်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အီးမေးလ်ဖြင့်စာဆက်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု အထူးလိုအပ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်စကားရပ်
များလည်း ရှိနေပါသည်။ ဆောင်ရန်ကိစ္စဆိုသည်မှာ ကျင့်ဝတ်နီတိကို ဆိုလိုပါသည်။ လုပ်ငန်းအရ အလျင်အမြန် အကြောင်းပြန်ကြားစေရန် အလိုရှိသော်ငြားလည်း “Don’t hesitate to contact me” ဟူ၍ မရေးသား သင့်ပေ။
ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးအတွက် “you can contact me for further clarifications” လို့ ရေးသားကြရသည်။ ရံဖန်ရံခါ စကား
ပြောဆိုသကဲ့သို့ “I think …” ဟူသောအရေးအသားများ ရေးလိုကြပါလိမ့်မည်။ I think သို့မဟုတ် guese ဟူသည့်စကားရပ်သည် ဖတ်ရှုသူအပေါ် ယုံကြည်မှု ကင်းဝေးစေပါသည်။ စာအဆုံးသတ်တွင် Business letter ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် Sincerely Yours ဟု မရေးသားသင့်ပေ။
“Would love to hear what you think” ဟု လှလှပပသုံးသင့်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် business email တွင် လူချင်းတွေ့ဆုံ၍စကားပြောရာတွင် အသုံးပြုသည့်စကားရပ်များ ရှောင်ရှားရပါမည်။ ဥပမာ “I hope you’re well” “To be honest …” “That’s fire” “Hey there” ” I don’t know” စသကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းများ မပါဝင်မိစေရန် အရေးကြီးလှပါသည်။
(ရှေ့အပတ် Report Withing ကို ဖော်ပြပေးပါမည်)
Previous PostWireless charging ထက် Dash Charge က ပိုကောင်းကြောင်း OnePlus စီအီးအို ပြောကြား
Next Post၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် AR headset တစ်မျိုး Apple ဖန်တီးနေဟုဆို